Diyopost.com :: ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी युक्रेनी नटालिया : ७ तस्विरमा हेर्नुहोस् उनको अर्धनग्न पोज ! ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी युक्रेनी नटालिया : ७ तस्विरमा हेर्नुहोस् उनको अर्धनग्न पोज ! - Diyopost.com
काठमाडौं । पोल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै ६ सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकबाट लाखौँ ठगीको अभियोगमा महानगरीय अपराध महासाखा टेकुको हिरासतमा रहेका युक्रेनी नागरिक श्रीमान श्रीमती रहेको पाइएको छ ।
उनीहरु विवाह पछि नेपाल आई राजधानीको पुतली सडकमा पिपुल वर्क ग्रुप नामक कम्पनि सञ्चालन गरी ठगी गर्दै आएका हुन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महासाखा टेकुले बुधबार युक्रेनी नागरिक नटालिया मेल्निचुक र विटेली बिल्लीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार नटालियाकी श्रीमान बिल्लीको नाममा उक्त कम्पनि सञ्चालित थियो । उनीहरुले कम्प्युटर मार्फत सुचना दिने उद्देश्य राखेर कम्पनि चलाएको देखाएपनि भित्र भने अवैध रुपमा नेपालीहरुलाई पोलयाण्ड पठाइदिन्छु भन्दै ठगी धन्दा चलेको थियो ।
अपराध महासाखाले उनीहरुलाई ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यसैबीच बिटाली र नटालियाको रोमान्स गर्दै गरेको तस्वीर फेला परेको छ ।